Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Museum an'i Kerta Gos any Bali. Indonezia
Museum Kert Gosa (Taman Kertha Gosa) any Bali
Museum Pavilion Kert Gos
Kerta Gosa dia manana rivo-piainana epika hindoa tany am-boalohany. Any amin'ny tanànan'ny Semarapura no misy azy, afovoany, akaikin'ny fihaonan-dàlana lehibe. Taman Gili Gardens, eo amin'ny faritany nananganana ny tranombakoka, dia efa tafaverina tamin'ny 1710.
Ny tena mahavariana dia ilay valindrihana voaravaka, izay misy sarin'ny tolona eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Nolokoina tamin'ny fomba Bali nentin-drazana izy io, mampatsiahy azy wayang ( fampisehoana saribakoly )
Ao amin'ny faritanin'i Kerta Gos, misy sarivongana, zavatra ary toetra mampiavaka ny Hindoisma na aiza na aiza.
Ny tranon'ny tranom-bakoka Kerta Gos dia ao anatin'ny sangan'asa marion'ireo sambo taloha fantatra amin'ny anarana hoe Taman Gili.
Ny Museum Kert Gos dia nanangona fanamarihana fandokafana marobe, izay mihatra amin'ny zava-misy fa mendrika ny hojerena ity toerana ity raha toa ianao ka mandalo ity faritra ity. Ny pavilion afovoany dia miorina eo amin'ny kamory ary tena tsara tarehy. Ny valan-javaboary misy ny tranom-bakoka dia miavaka ihany koa amin'ny hatsarany sy ny toetrany mahafinaritra.
Ny tranom-bakoka Kerta Gos dia miorina eo Denpasar mankany Candidasa, izany hoe any avaratra atsinanan'i Bali ao an-tanànan'i Semarapura. Sahabo ho 20 km atsinanan'ny Ubud no misy azy.
adiresy: Kertha Gosa Pavilion, Jalan Untung Surapati 80864, ​​Semarapura Kangin, Bali, Indonesia
Museum an'i Kerta Gos amin'ny sari-tanin'i Bali
Alatsinainy - 8.00 - 17.00
Talata - 8.00 - 17.00
Alarobia - 8.00 - 17.00
Alakamisy - 8.00 - 17.00
Zoma - 8.00 - 17.00
Sabotsy - 8.00 - 17.00
Alahady - 8.00 - 17.00
Faritany tsara tarehy ao amin'ny tranombakoka
Betsaka ny sary sokitra ao amin'ny faritany
Kert Gos Pavilion
Sary hosodoko tsy manam-paharoa ao Kerta Gosa